Dhacdooyinka - Ururka Xarumaha Xarumaha Qorista
Ururka Xarumaha Qorista Caalamiga ah wuxuu qabtaa afar munaasabadood oo sanadle ah oo lagu xirayo xubnaheenna laguna dhiirrigelinayo aqoonyahannada iyo xirfadleyda xarunta qorista.
Shirka Sanadlaha ah (dayr kasta)
Shirkeenna dayrta ayaa ah dhacdadeena ugu weyn sanadka iyadoo 600-1000 + kaqeybgalayaashu ay kaqeyb galayaan boqolaal bandhigyo, aqoon isweydaarsiyo, iyo miisaska wareega ee saddexda maalmood ah. Shirka sanadlaha ah waa munaasabad soo dhaweyn ah oo loogu talagalay macallimiin cusub oo qibrad u leh qorista, aqoonyahanno, iyo xirfadlayaal. halkan.
Machadka Xagaaga (xagaa kasta)
Machadkeena Xagaaga waa aqoon isweydaarsi deg deg ah oo usbuuc soconaya ilaa iyo 45 xirfadlayaal xarumo qoraal ah si ay ulashaqeeyaan 5-7 aqoonyahano / hogaamiyeyaal xarumo khibrad qoris ah. Machadka Xagaagu waa meel fiican oo laga bilaabo agaasimeyaasha xarumaha qorista ee cusub.
Toddobaadka Xarumaha Qorista Caalamiga (Febraayo kasta)
The Toddobaadka IWC bilaabay 2006 si ay u sameeyaan shaqada xarunta qoraalka (iyo bogaadin) muuqan. Waxaa sanad walba la xusaa maalinta jacaylka aduunka.
Wada shaqeyn @ CCCC (gu 'kasta)
Wadashaqeynta hal-maalin waa shir sanadle ah oo yar-yar Arbacada kahor CCCC (Shirka ku saabsan Dhismaha Kuleejka & Isgaarsiinta). Ku dhowaad 100 kaqeybgalayaashu waxay ka xushaan fadhiyo isku mid ah oo ku saabsan mawduuca xarunta qoraalka. Soo-bandhigayaasha iyo ka-qaybgalayaasha waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay adeegsadaan Wada-shaqeynta si ay uga helaan jawaab celin iyo dhiirrigelin ku saabsan mashruucyada howsha ku jira.
Marabtaa inaad lahadasho kaqeybgalayaashayada iyo xubnahayaga Kafaala dhacdo!
Marabtaa inaad martigaliso dhacdo IWCA mustaqbalka ah? Fiiri hagaha kursiga dhacdadayada.